Xildhibaanada Baarlamaanka Kenya oo maanta bilaabaya dooda Miizaaniyada. | Starfm.co.ke	Tuesday, May 21st, 2013	Home
Xildhibaanada Baarlamaanka Kenya oo maanta bilaabaya dooda Miizaaniyada.
Share05.Jun.2012:- Xildhibaanada Baarlamaanka Kenya ayaa maanta lagu wadaa in ay bilaabaan dooda miizaaniyadii uu horaan u soo bandhigay wasiirka maaliya Mr Njeru Githae.
Miizaaniyada oo dhan 1-Trillion ayaa ah mid si wayn u balaaran marka la eego xaalada dhaqaale ee dalka,iyadoo dhawaana uu Wasiirka Maaliyada usoo Bandhigay Golaha Baarlamaanka .
Qaar ka mid ah wasaaradaha dowlada oo horay lacagaha loo qoondeeyo ay yaraan jireen sida wasaarada gaashaandhiga ayaa sanadkan loo qoondeeyay lacago badan .
Wasiirka Maaliyada ayaa tilaabadani ku micneeyay in dalka Kenya uu dagaal adag kula jiro xarakada Alshabab haatan islamarkaana Wasaarada Gaashaandhiga ay u baahnatahay qarashaad badan.
Sidoo kale wasaaradaha kale ee lacagaha badan dalbaday ayaa waxaa ka mid ah wasaarada Amniga Gudaha oo sheegtay in sugida Amniga gudaha ay ku baxayso lacag badan maadaama ay jiraan khataro argagixiso .
Miizaaniyada ay maanta bilaabayaan doodeeda xildhibaanada baarlamaanka ayaa waxaa ka mid ah meelaha ay lacagta ugu badan ku baxayso maaraynta 47 Counti ee uu dalka ka koobanyahay .
Local News	Hogaamiyaasha Gudiyada Barlamaaniga oo la doortay.	May 20, 2013 Dhamaan gudiyada barlamaaniga marka laga reebo laba gudi ayaa waxaa maanta doorsho dhacday la wareegay hogaankooda isbahaysiga Jubille.
Ms Amina ...	Madaxwayne Kenyatta oo digniin u diray burcada danbiyada gaysata	May 20, 2013 Madaxwayne Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in dowlada ay wax waliba oo karaankeeda ah samayn doonto si loola dagaalamo ...	Dowlada : safarkii Madaxwayne ku xigeenka qarash badan kuma bixin	May 20, 2013 Dowlada ayaa beenisay in safarka uu madxwayna ku xigeenka ku marayo qaar ka mid ah wadamaada africa ay ...	Raila Odinga: Shaqo kama doonayo dowlada Jubilee.	May 20, 2013 Ra`iisul wasaarihii hore ee dalka Raila odinga ayaa waxa uu sheegay in uusan wax shaqa ah ka doonayn ...	xaalada magaalda wajr oo kacsan ka dib dilkii xalay ka dhcay magaalada	May 19, 2013 xaalada magaalada wajir ayaa waxa eey saakay tahay mid qasan ka dib markii dibadbaxayaal ka careysan dilkii xalay ...	Madaxwayne Kenyatta oo meesha ka saaray kordhinta mushaaraadka xildhibanada .	May 19, 2013 Madaxwayne Uhuru Kenyatta ayaa waxa uu meesha ka saaray suura galnimada in mushaarka loo kordhiyo xildhibaanada baarlamaanka xiligan ...	Sports	Falcao ” Warka Mustaqbalkeyga Laga Sheegey Waa Been Abuur ”.	May 18, 2013 Weeraryahanka kooxda Atletico Madrid Radamel Falcaoayaa beeniyay in uu wax ka og yahay in ay jiraan wadahaadlo uu ...	Seedorf Oo Loo Badinayo Inow Tababara Ka Noqdo Kooxda AC Milan	May 18, 2013 Mulkiilaha kooxda Milan Silvio Berlusconi ayaa dhawaan sheegay in tababare Massimiliano Allegri uu ka tagayo kooxda isla markaana ...	Tababarahii Hore Ee Kooxda AC Milan Massimiliano Allegri oo U Wareegay Kooxda Roma	May 18, 2013 Mulkiilaha kooxda Milan Silvio Berlusconi ayaa tibaaxay in tababaraha kooxda Massimiliano Allegri uu u wareegayo kooxda Roma marka ...	David Moyes Kulanka So Socoto Maxoy Samedonaa ?? Maxadna Ku Qiyaasi Karta ?	May 18, 2013 Tababaraha cusub ee kooxda Manchester United, David Moyes ayaa diyaar u ah in uu bilaabo shaqada kooxda United ...	Xidiga Barcelona Andres Iniesta Oo Aan Ku Faraxsaneyn La Joogitanka Kooxdaasi	May 18, 2013 Ninka labaad ee ugu wanaagsan kooxda Barcelona Andres Iniesta ayaa sheegay in uusan ku faraxsaneyn xiligan Barcelona .